Koreen hoji raawwachiistuu ADWUI nageenya biyyoolessaarratti mari’achuun kallattii kaa’e – Fana Broadcasting Corporate
Koreen hoji raawwachiistuu ADWUI nageenya biyyoolessaarratti mari’achuun kallattii kaa’e
Finfinnee, Caamsaa 8,2011(FBC)- Koreen hoji raawwachiistuu ADWUI nageenya biyyoolessaarratti mari’achuun kallattii kaa’e.
Korichi walga’iisaa har’aatin hojiilee jijjiirrama waggaa 1n nageenya biyyoolessaarratti hojjetaman gamaaggameera.
Milkaa’innii fi gufuuwwan maal akka turan gamaaggamamee kallattiin kaa’ameera.
Humnoonni hidhatanii biyyoota alaatti socho’aa turan hidhannoo isaanii hiikkatanii gara biyyaa akka galan taasifamuu fi hariiroon Ityoophiyaa fi Eertiraa waraana yookin nageenya hin turre araaran goolabamuun milkaa’inaan ka’eera.
Jijjiirrama bariirraa kaasee dhaabbilee nageenyaarratti hojiin riifoormii hojjetamuu eegaluu, hoggansi dhaabbilee kanneenii aantummaa siyaasaarraa walaba akka ta’u gochuun ciminaan ka’eera.
Raayyaan Ittisa Biyyaa FDRI riifoormii fakkeenya ta’u gaggeessuun, caaseffamasaa ammayyeessuuf hojiin hojjetame milkiidha jedheera korichi.
Damee nageenyaa fooyyessuuf hojiin hojjetame danuu ta’us, rakkooleen mudachuu gamaaggameera.
Finxaalessummaan sabummaa, gurmiin idilee hin taane yookin jigiin, daddabarsi meeshaa waraanaa seeran alaa, oduun sobaa miidiyaalee hawaasummaa, buqqa’uu, du’uu fi sodaan nageenyaa rakkoolee jajjaboo keessaa muraasa turan jedheera koreen hoji raawwachiistuu ADWUI.
Mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisudhaan nageenya biyyoolessaa mirkaneessuun xiyyeeffannaasaa akka ta’u kallattii kaa’era.
Rakkoon nageenya waaraan akka hin furamne kan taasisan keessaa hojii siyaasaa waan ta’eef, hojiin nageenyaa hojii siyaasaa waliin walcinaa akka hojjetamu, nageenyi amansiisaanis yeroo gabaabaatti akka bu’u kallattii kaa’era.
Rakkoon nageenyaa bulchiinsa daangaa waliin muul’achaa ture yeroo dhiyoodhan as furamuu kan kaase korichi, waaraan furuuf garuu naannon tokko naannoo biraatin, naannoleen federaala waliin walitti dhufeenyi gama kanaan qaban, gurmii fi ijaarsi caasaa nageenyaa naannolee heera mootummaatin akka furamu kallattii kaa’era.
Qaamoleen nageenyaa aantummaa ummataa mirkaneessuun nageenya waaraaf akka hojjetan, kabajamuu mirgoota demokraasii fi namoomaaf kutannoon akka socho’an kallattii kaa’era.
Hoggansi sadarkaan jirus ummataan qindoomee nageenya waaraa buusuuf hojjechuu qabu jedheera.
Sochii fedhii humnaan fe’uuf taasifamu dhaabsisuuf akka tumsamu waamicha dhiyeessera.
Rakkoolee nageenyaarratti bal’inaan mari’achuun, nageenya waaraa buusuuf kallattii raawwii kaa’uusaa Waajjirri Mana Maree ADWUI beeksiseera.